Jharana Thapa in bar dancer role in Swabhiman – Nepali Movies
Jharana Thapa in bar dancer role in Swabhiman
Jharana Thapa, for the first time is doingarole of bar dancer in movie called Swabhiman. The movie, featuring Rajesh Hamal, Jharana Thapa, and Saujanya Subba in leading role, is in last stage of shooting. Read more in Nepali:
प्यास, प्यास प्यासै देख्छु
सबको नजरमा पाइन्छ-पाइँदैन मैले खोजेको
दिल यो बजारमा
झरना थापा यो गीतमा आधा दर्जन कोरससहित मस्त नाचिरहेकी छिन् । स्टेजअगाडि धूमपान र मदिराप्रेमी उनको नृत्यबाट भरपूर मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । कोही गीतसँगै झुम्दै छन् त कोही नर्तकीहरूको नृत्यको तालमा आफूलाई पनि समाहित गरिरहेका छन् । लाजिम्पाटको थर्ड नाइट डान्स बारमा दिउँसै ‘मदहोश रात’ को छनक दिँदै नाचिरहेकी झरना आफूलाई जतिसक्दो छरितो ढंगमा प्रस्तुत गर्दै छिन् ।
झरनालाई बारमा नाच्दा ‘नौलो अनुभव’ भएछ । ‘आइटम डान्स गरे पनि पहिलोचोटि बार डान्सरको भूमिकामा छु,’ निर्माणाधीन फिल्म स्वाभिमानको सेटमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘तर सिम्पल रोल छ । बाध्यताले बार डान्सर बन्ने युवती प्रतिनिधि भूमिकामा छु । नयाँ अनुभव भएको छ ।’ झरना र कोरसलाई नृत्य/निर्देशन गर्दै थिए कविराज गहतराज । सट खिच्दै थिए, शम्भु सापकोटा । यसै फिल्मबाट निर्मातासमेत बनेका निर्देशक मदन घिमिरे भने बारको एउटा कुनामा गम्दै थिए । ‘यो गीत सुटिङ गर्न दुई दिन लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘हिजो बिहानदेखि साँझसम्म सुटिङ भयो । आज पनि बिहानदेखि सुरु गरेको साँझसम्म सिद्धिन्छ ।’
सुटिङ भइरहेको लोकेसन डनहरू आउने नियमित अखडा भएको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरू जमघट हुने थलो हो, यो । यहीँबाट डिल हुन्छ, उनीहरूको ।’ झरनाको डान्सको बीचमा राजेश हमाल र खलपात्रहरूको भेटघाट र ‘डिल’ हुने सट आइतबार नै खिचिसकिएको उनले बताए ।
आफ्नो फिल्मको प्रमुख पात्र गुण्डागर्दी गर्ने भए पनि स्वाभिमानी भएको निर्देशक मदनले प्रस्ट्याए । ‘काम जेसुकै गरे पनि ऊ स्वाभिमानी हुन्छ,’ बार डान्सर युवती पनि स्वाभिमानी भएको बताउँदै उनले भने, ‘मान्छेले आफ्नो इमान कहिल्यै छाड्नुहुन्न भन्ने सन्देश छ, मेरो फिल्ममा ।’
स्वाभिमानको सुटिङ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फिल्ममा राजेश हमाल, झरना थापाबाहेक सौजन्या सुब्बा पनि प्रमुख भूमिकामा छिन् । बोगटेश्वर फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भइरहेको यो फिल्मको कार्यकारी निर्माता रामकेशर बोगटी हुन् । महेश खड्काको संगीत रहेको फिल्ममा सुटिङ भइरहेको यो आइटम गीत अन्जु पन्तले गाएकी हुन्। (साभार – नयापत्रिका)
Posted by maha at 4:36 pm	Tagged with: Jharana Thapa, Rajesh Hamal, Saujanya Subba, Swabhiman
Rejina Upreti, brand ambassador of Samsara Pasni of Shiva Shrestha’s son